Daawo Sawiro: Dhismihii Garoonka Waamo ee magaalada Kismaayo oo heer gabo gabo ah maraya – Gool FM
Daawo Sawiro: Dhismihii Garoonka Waamo ee magaalada Kismaayo oo heer gabo gabo ah maraya
Dhakoos April 21, 2017
(Kismaayo) 21 Abriil 2016. Waxaa dhamaad ku dhow dhismaha garoonka kubadda cagta ee Waamo kaas oo ku yaala magaalada Kismaayo oo xarunta u ah Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Madax waynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo madax kale ayaa saakay booqasho ku tagay garoonka Waamo oo uu dhisamahu ku socdo waxaana madax waynaha loo sharaxay halka ay waqtigaan wax marayaan.
Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta jubbaland axmed Taqal ayaa madax waynaha uga war bxiyay halka uu marayo dhismaha garoonka isga oo sheegay in waqti dhow uu soo dhamaan doono dhismaha hadda socda laguna bilaabi doono tartamo kala duwan uu xiriirku qabto.
Booqashada Madax waynaha ayaa ku aa danayd in uu la socodo halka uu marayo dhimaha garoonka madaama sanadkaan la rabo in garoonkaan uu marti galiyo tartanka Dowlad Goboleedyada dalka oo sanadkii hore la shaaciyay.
Madaxda xiriirka kubadda cagta Jubbaland ayaa ku jira dadaal lagu dar dar galinayo in waqti dhow la soo damaystiro dhimaha ku socda garoonka Waamo ee magaalada Kismaayo.
DEG DEG: Qori tuurkii afar dhamaadka Champions League-ga oo dhacay